Ilungiselela i-PC yangaphakathi yokufinyelela kwangaphandle | Martech Zone
NgoMsombuluko, Julayi 7, 2008 NgoLwesihlanu, January 11, 2013 Douglas Karr
Ngokwamukelwa kwama-firewalls nama-routers, ukuxhuma kwenye ikhompyutha nge-Intanethi sekuyinselelo yangempela. Uma ungathanda ukumisa ikhompyutha yakho ukuze ukufinyelela kwangaphandle kwenzeke, kunezinguquko ezithile zokumiswa okujule okudingeka uzenze kunethiwekhi yakho.
Thola ikheli lakho le-IP noma ikheli le-DynDns
Isinyathelo sokuqala sokukuthola ukuthola ikheli lakho. Emhlabeni we-Intanethi, lokhu kwaziwa njengekheli le-IP futhi kungalandelwa kalula.
Thola ukuthi ngabe unekheli le-IP le-Static (elingashintshi) noma ikheli le-IP leDynamic (eliguqukayo). Amathuba ukuthi uma uyi-DSL noma uyi-DSL Pro ukuthi unekheli le-IP elinamandla. Uma uku-Business DSL noma i-Cable Modem, kungenzeka ukuthi umile.
Leli ikheli le-IP elinikezwe indawo yakho yokungena kunethiwekhi yakho. Uma umile, azikho izinkathazo. Uma uyiDynamic, bhalisela insizakalo efana ne- I-Dynamic DNS. Ama-routers amaningi anamuhla akwazi ukuxhumana ne-DynDNS ukugcina ikheli lakho le-IP libuyekeziwe. Ngemuva kwalokho, kunokuba unikeze othile ikheli lakho le-IP, uzobanikeza isizinda esinjenge- findme.homeip.net.
Uma ungalazi ikheli lakho langaphandle le-IP, ungasebenzisa isayithi elifana ne- Yini ikheli lami le-IP ukuthola.
Faka i-DynDns yakho noma ikheli le-IP bese ubona ukuthi uthola impendulo yini (Vula i- “Command Prompt” noma i- “Terminal” bese u-Run: ping findme.homeip.net
Uma ungatholi mpendulo, ungahle udinge ukunika amandla i-Pinging ekucushweni kwe-router yakho. Bheka imibhalo ye-router yakho.
Nika amandla ukudluliselwa kwe-PORT ku-Router yakho
Manje njengoba sesinekheli lakho, kubalulekile ukwazi ukuthi yini ngu ukufaka ifayela lakho le- ikhaya ngokusebenzisa. Lokhu kwaziwa njenge-PORT kukhompyutha. Izicelo ezahlukahlukene zisebenzisa ama-PORT ahlukene, ngakho-ke kubalulekile ukuthi sibe ne-PORT elungile evuliwe futhi ihanjiswe kukhompyutha yakho. Ngokuzenzakalelayo, iningi lama-routers wonke amachweba avaliwe ukuze kungabikho muntu ongena kunethiwekhi yakho.
Ukuze i-PC yomthombo ixhumane ne-PC okuyiwa kuyo, i-Router yakho idinga ukuqondisa ithrafikhi kwi-PC yakho.
Sikhulume ngokubaluleka kwekheli le-Static IP lenethiwekhi yakho, manje kubalulekile ukuthi ube nekheli le-Static IP le-PC yakho kunethiwekhi yakho yangaphakathi. Bheka imibhalo yakho ye-Router yokuthi ungayilungisa kanjani i-Static IP Address ye-PC yakho yangaphakathi.
Ngokuya ngohlobo lwesicelo ofisa ukuxhuma kuso, kuzofanela unike amandla ukudluliselwa kwe-PORT kusuka ku-Router yakho kuya kukheli le-IP langaphakathi le-PC lakho.
I-HTTP - uma ufisa ukusebenzisa i-web server kwi-PC yakho yangaphakathi futhi uyenze itholakale ngaphandle, i-PORT 80 izodinga ukudluliswa.
I-PCAnywhere - i-5631 ne-5632 izodinga ukuthunyelwa phambili.
I-VNC - 5900 izodinga ukuthi idluliselwe (noma uma ulungiselele itheku elehlukile, lisebenzise lelo).
Nika amandla izilungiselelo ze-Firewall ku-PC yakho
Ama-PORTS afanayo owathumele ku-PC yakho azodinga ukunika amandla isoftware ye-PC yakho ye-Firewall. Bheka imibhalo yakho ye-firewall nokuthi ungavumela kanjani uhlelo lokusebenza kanye / noma amachweba ofisa ukuthi afinyeleleke ngaphandle.
Ukwenza lolu shintsho lokumisa akulula, kepha uma konke kusebenza kahle kufanele ukwazi ukufinyelela kwi-PC yakho ngokusebenzisa uhlelo olukhethile kusuka lapho uthanda khona.
QAPHELA: Akunandaba noma yiluphi uhlelo olisebenzisayo, qiniseka ukusebenzisa igama lomsebenzisi nephasiwedi enzima kakhulu! Abaduni bathanda ukuskena amanethiwekhi befuna amachweba avulekile ukubona ukuthi bangakwazi ukufinyelela kanye / noma ukuqondisa lawo ma-PC. Ngokwengeziwe, futhi ungakhawulela amakheli we-IP ozohlinzeka ngokufinyelela kuwo.
Isizinda Sishintshelwe ku-Markettechblog.com